म्याच फिक्सिङ प्रकरण: पैशा खाएर हार्ने गरेको स्वीकार | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← एनआरएनए अध्यक्षमा पुनः शेष घले निर्वाचित उपसंयोजकमा धर्मराज गिरी
अन्ततः भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघले वक्तव्य जारी गर्‍यो, के-के भन्यो ? →
म्याच फिक्सिङ प्रकरण: पैशा खाएर हार्ने गरेको स्वीकार
शम्भु कट्टेल/गोविन्द रेग्मी
म्याच फिक्सिङको धन्दामा चरी पनि साझेदार !
काठमाडौं : प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान सागर थापासहितका खेलाडीले म्याच फिक्सिङ (खेल मिलेमतो) मा आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार गरेका छन् । प्रहरीसँगको बयानका क्रममा बिहीबार उनीहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मिलेमतो गरी पैसा लिएर आफ्नो मुलुकलाई हराएको स्वीकार गरेका हुन्।
खेल मिलेमतोमा संलग्न रहेको आरोपमा बुधबार प्रहरीले कप्तान थापासहित पाँचजना खेलाडीलाई पक्राउ गरेको थियो ।खेल मिलेमतो गरेबापत फुटबलका पूर्वखेलाडी अन्जन केसी र खेलाडी रीतेश थापाले विदेशी एजेन्टबाट रकम लिने गरेको स्वीकारे । खेल मिलेमतो गरेबापत नेपाली खेलाडीलाई सिंगापुरका नागरिक विल्सन राज, उडल्यान्ड सिंगापुरका टिटानी पेरीस्वामी, केशभन पटनलगायत एजेन्टले रकम दिने गरेका थिए । त्यसको चाँजोपाँजो कप्तान सागर थापाले मिलाउने गरेका थिए ।
सिंगापुरे नागरिक विल्सन नेपाल आएका बेला कप्तान थापाले दरबारमार्गको एक रेस्टुरेन्टमा भेटी रकम मोलमोलाइ गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मिलेमतो गरेको भन्दै कप्तान थापासहित रीतेश थापा, सन्दीप राई, विकाससिंह क्षेत्री र पूर्वखेलाडी अन्जन केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । मिलेमतोमा कप्तान थापा, केसी र रीतेशको मुख्य भूमिका रहेको पाइएको छ । केसीले आफू टोलीमा नहुँदासमेत अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उपस्थित भएर खेलाडीलाई प्रभावित गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
केसीले फिलिपिन्स र भारतको दिल्लीमा भएका प्रतियोगितामा बिनाहैसियत सहभागी भई खेलाडीलाई प्रभावित गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘खेलाडीले संगठित रूपमै खेल मिलेमतो गरेको देखिन्छ । उनीहरूको अन्य कनेक्सन र एन्फा पदाधिकारीको संलग्नता’bout समेत छानबिन थालेका छौं ।’
खेलाडीले सन् २००८ मा भएको मर्डेका कप, सन् २००९ को साफ च्याम्पियनसिप, सन् २०११ मा मलेसियामा भएको मैत्रीपूर्ण खेल, सन् २०११ मा फिलिपिन्समा भएको मैत्रीपूर्ण खेल, सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरू कप र सन् २०१४ मा दक्षिणकोरियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलमा ठूलो रकम लिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
प्रहरीसँगको बयानमा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल खेलमा म्याच फिक्सिङ गरी नेपाली फुटबल टिमलाई हराएर रकम लिएको स्वीकारेका छन् ।केसी र रीतेशले वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर र साइबर मनी ट्रान्सफरबाट विभिन्न मुलुकबाट फिक्सिङबापतको रकम बुझेका थिए ।
भारतमा सन् २०१२ मा भएको नेहरू कपमा क्यामरुनसँग ४–० ले हार्ने सर्तमा पाँच हजार अमेरिकी डलरमा सहमति भएको थियो । तर गोलरक्षक रीतेशको ठाउँमा खेलाडी परिवर्तन हुँदा नेपाल ५–० गोलले पराजित भएपछि रकम पाएका थिएनन् । सन् २०१४ मा कोरियामा सम्पन्न एसियाडमा पनि खेल हार्ने सर्तमा खेलाडीले पाँच हजार अमेरिकी डलर लिएका थिए ।
सन् २००८ मा भएको मर्डेका कपमा अफगानिस्तानसँग २–२ गोलको बराबरी खेल्ने सर्तमा उनीहरूले प्रतिखेलाडी पाँच हजार अमेरिकी डलर लिएका थिए । यसैगरी सन् २००९ को साफ च्याम्पियनसिपमा तीन हजार ६१ अमेरिकी डलर लिई दामासाही बाँडेका थिए । सन् २०११ मा मलेसियासँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा २–० गोलले हार्ने सर्तमा र सन् २०११ मा फिलिपिन्ससँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा ४–० गोलले हार्ने सर्तमा उनीहरूले प्रतिखेलाडी पाँच हजार अमेरिकी डलर लिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
चरी व्यापार साझेदार
खेल मिलेमतो गराउने मुख्य योजनाकार केसीले प्रहरी इन्काउन्टरमा एक वर्षअघि मारिएका दिनेश अधिकारी (चरी) सँग मिलेर व्यवसाय गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । केसीले मिलेमतोबाट आएको पैसा रक्सी पसल, रेस्टुरेन्ट र क्यासिनोमा लगानी गर्दै आएका थिए । केसीकै योजनामा कप्तान थापाले अन्य खेलाडीलाई प्रयोग गरेको स्रोतले बताएको छ ।
दसैंपछि मात्र अदालत
पक्राउ परेका कप्तान थापासहितका पाँच खेलाडीले दसैं बिदाभर प्रहरी हिरासतमा नै बस्नु पर्नेछ । दसैं बिदाका कारण अदालत बन्द भएकाले उनीहरूलाई कार्यालय खुलेपछि मात्र अदालतमा हाजिर गराउने तयारी प्रहरीले गरेको छ । प्रहरीले त्यसपछि मात्र म्याद थप गर्नेछ । प्रहरीले उनीहरूलाई संगठित र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।
खेलाडी पक्राउ परेपछि उनीहरूको परिवारमा तनाव बढेको छ ।विश्वासै गर्न नसकिने अभियोगमा थुनामा परेका खेलाडीलाई भेट्न गएका एक आफन्तले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उनीहरूले यस्तो गर्लान् भन्ने सोचेको पनि थिइनँ । चाडबाडको बेलामा थुनामा पर्दा सबै परिवार तनावमा छौं ।’
हिरासतमा रहेका खेलाडीमध्ये क्षेत्री सबैभन्दा बढी तनावमा देखिएका छन् । क्षेत्रीले सन् २०११ मा राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यु गरेका थिए । घाइते भएका कारण उनी अहिले टोलीमा छैनन् । क्षेत्रीले केसी र कप्तान थापाको लहैलहैमा लागेर आफू फसेको बयान दिएको स्रोतले बतायो ।
संवेदनशील देखिएन एन्फा
पाँच खेलाडी खेल मिलेमतो गरेको आरोपमा पक्राउ पर्दा नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भने बेखबरजस्तो देखिएको छ । भारतमा दुई महिनापछि आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिप फुटबलका लागि टोलीका कप्तान थापा, उपकप्तान राई र रीतेश प्रशिक्षणमै थिए । क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेले पनि उनीहरू राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी हुन् ।
खेलाडी पक्राउ परेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समेत व्यापक रूपमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरिरहेका छन् । तर एन्फाका कुनै पनि जिम्मेवार पदाधिकारी खेलाडीका विषयमा बुझ्न र घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन अग्रसर देखिएका छैनन् । यसअघि एन्फा र खेलाडीका विषयमा साधारण समाचार बाहिर आउँदासमेत एन्फा कार्यसमितिको बैठक बसेर विभिन्न निर्णय हुन्थ्यो । अहिले गम्भीर आरोपमा खेलाडी पक्राउ पर्दासमेत एन्फा बैठक बसेको छैन ।
एन्फाले खेलाडी पक्राउ परेको २४ घन्टापछि मात्र विज्ञप्ति जारी गरेको छ । एन्फाका महासचिव धीरेन्द्र प्रधानले विज्ञप्ति जारी गरी घटनाले एन्फालाई दुःखी र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रहरीको अनुसन्धानका लागि एन्फाले आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख छ । अनुसन्धानको किनारा नलागेसम्म खेलाडीलाई फुटबल गतिविधिमा संलग्न नगराइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।